Vaovao - Ny milina fampihenana laser 1060nm diode ve safidy tsara kokoa ho an'ny tavy mafy kibo, ny tantana fitiavana ary ny tavy hafa?
Raha niezaka mafy nanala ny tavy kibo mafy loha ianao, mitana ny fitiavana ary karazan-tavy hafa, tsy isalasalana fa nandinika ireo doka amin'ny fahita lavitra momba ny CoolSculpting ianao. Ireo doka ireo dia manasongadina ny fahafahan'ny fitsaboana tsy manala fanafody manala tavy sisa tavela aorian'ny sakafo sy fanatanjahantena nanampy anao hampihena. Taorian'ny taona maro nitondrako ny marary sy nanatanterahako fomba fanatsarana tarehy an'arivony dia nanatsoaka hevitra aho fa ny fitsaboana hafa tsy manasitrana dia safidy tsara kokoa ho an'ny marary maro. Ity fitsaboana ity dia 1060nm diode laser slamping machine matavy mirehitra.
Raha tokony hampiasa hatsiaka dia milina fampihenana laser diode 1060nm no mampiasa hafanana avy amin'ny laser hamonoana sela matavy. Izy io dia manana ny fizotrany ankapobeny - sela matavy no kendrena, novonoina ary navoakan'ny vatana tsimoramora. Mandritra ny volana vitsivitsy aorian'ny fitsaboana anao dia ho hitanao ny fihenan'ny tavy amin'ny faritra kendrena.
1060nm diode laser sliring machine dia mety ho an'ny olona manana faritra kely matavy maditra nefa raha tsy izany dia salama ara-batana tsara. Ny valiny dia maharitra ihany koa raha mbola mitazona ny lanjany sy ny fahasalamany ara-batana ilay marary.
Ny endrik'ilay fitaovana dia manasarotra ny fampiasana azy amin'ny ampahany amin'ny vatana miolaka, noho izany dia voafetra kely noho ny safidy hafa. Ny marary sasany dia milaza fa mahatsapa fahatsapana may kely noho ny hafanana, na dia mihamangatsiaka aza ilay fitaovana mandritra ny fitsaboana.
Miaraka amin'ny milina fampihenana laser 1060nm diode, tsy misy suction na misintona tisy. Mamelatra eo ambonin'ilay faritra tianao hikorisana ilay fitaovana. Ny angovo laser dia tafiditra ao anaty sela ary miteraka ratra mafana amin'ny sela matavy. Mandalo fahafatesan'ny sela voarindra izy ireo ary hanala azy ireo ny hery fiarovanao.
1060nm diode laser sliring machine dia mety kokoa
Raha olona be atao ianao (amin'izao andro izao, iza no tsy?) Mitsabo faritra roa ao anatin'ny 25 minitra miaraka amin'ny milina fanamoriana laser diode 1060nm dia mitahiry fotoana be noho ny fandaniana adiny iray isaky ny fizarana amin'ny cryolipolysis. Ary satria tsy misy ny fihenam-bidy misy milina fanenomana laser 1060nm, afaka mahazo fitsaboana ianao ary miverina miverina amin'ny fiainanao be atao.